AHOANA NO FOMBA FITARIHANA TRUCKERS 2 AMIN'NY WINDOWS 7 - WINDOWS - 2019
Mandeha ny Game Truckers 2 amin'ny Windows 7
Navoaka tamin'ny taona 2001 ilay kamiao mpanamboatra fiara malaza 2. Nahazo ny fonon'ireo mpilalao maro avy hatrany ny lalao ary nahazo mpankafy lehibe. Nandritra ny fito ambin'ny folo taona dia niova ny fiasa, anisan'izany ny rafitra miasa ao amin'ny ordinatera. Mampalahelo fa ny Truckers 2 ihany no miasa tsara amin'ny Windows XP sy ny dikan-teny etsy ambany, na dia misy ihany aza ny fomba hanombohana azy amin'ny Windows 7. Ity no lahatsoratra natokana ho antsika androany.
Manaova ny Game Truckers 2 amin'ny Windows 7
Ho an'ny fampiharana ara-dalàna ny fampiharana efa ela tamin'ny OS vaovao, ilaina ny manova ny rafitra sasany ary mametraka fepetra sasany amin'ny lalao. Vita izany mora foana, mila manaraka ny torolàlana etsy ambany ianao, ary mba tsy hikorontan-tsaina, dia nopotehinay izany ho dingana.
Dingana 1: Manova ny habetsaky ny harena voaangona
Raha mampidina ny baran'ny loharanom-pamoakan'ny rafitra ianao, dia hanampy ny Truckers 2 mba hihazakazaka eo amin'ny solosainao. Alohan'ny hanatontosana ity fananganana ity dia ilaina ny mihevitra fa hisy fiantraikany amin'ny dingana hafa rehetra ny fanovana, izay mitarika ho amin'ny fihenan'ny fahombiazana na ny tsy fahafahan'ny programa manokana. Rehefa vita ny lalao, dia manolo-kevitra ny hamerenana indray ny soatoavina fanombohana Ity dingana ity dia natao amin'ny fampiasana ny tranokala.
Hazòny ny fampifandraisan-kaba Win + Rto launch a window "Run". Midira eny an-tsahamsconfig.exeary tsindrio avy eo "OK".
Mankanesa amin'ny tabilao "Loading"toerana izay mila mifidy bokotra iray "Safidy fanampiny".
Jereo ny boaty "Isan'ny processeurs" ary mametraha ny sandany 2. Manaova toy izany koa "Faharesena farafaharatsiny"by asking 2048 ary fenoy ity menu ity.
Ampiharo ny fanovana ary atsangano indray ny PC.
Ankehitriny, ny OS dia mihazakazaka amin'ireo fepetra ilainao, afaka mandroso soa aman-tsara mankany amin'ny sehatra manaraka ianao.
Dingana 2: Mamorona batery BAT
Ny rakitra BAT dia andiam-panaraka ny fizotran'ny mpampiasa na ny rafitra. Mila mamorona sora-tanana toy izany ianao mba hanombohana ny fampiharana. Rehefa manomboka, dia hivoaka ny Explorer izy, ary rehefa averina ilay simulator, dia hiverina amin'ny teo aloha ilay izy.
Sokafy ny lahatahiry root amin'ny lalao, tsindrio ny bokotra ankavanana amin'ny toerana malalaka ary mamoròna antontan-taratasy.
Apetaho ity script ity manaraka ity.
Manomboha c: Windows explorer.exe
Amin'ny alalan'ny menu popup "Rakitra" find the button "Save As".
Lazao ny rakitra Game.batizay Game - ny anaran'ny rakitra doka amin'ny famoahana ny lalao izay voatahiry ao amin'ny lahatahiry root. saha "Karazana endri-tsoratra" tokony hanan-danja "Ny rakitra rehetra"toy ny ao amin'ny pikantsary etsy ambany. Arovy ny tahirin-tsoratra ao amin'ny lisitra iray ihany.
Ny hafa rehetra dia manomboka ny Truckers 2 irery ihany amin'ny alalan'ny famoronana Game.batAmin'io fomba io no hivoahan'ny script.
Dingana 3: Fanovana ny fanatsarana ny lalao
Azonao atao ny manova ny fikirakirana ny fampiharana iray raha tsy mampiasa azy amin'ny alàlan'ny rakitra manokana. Ity fepetra tokony hataonao manaraka ity.
Ao amin'ny fototry ny ordinatera miaraka amin'ny finday simulator TRUCK.INI ary sokafy amin'ny alalan'ny Notepad.
Ao amin'ny sary etsy ambany, dia marihina ny tsipika mahaliana. Ampitahao amin'ny soatoavina ny soatoavin'izy ireo ary ovaina ireo izay tsy mitovy.
feo = on
bord = on
Vonjeo ny fanovana amin'ny fipihana ny bokotra mety.
Amin'izao fotoana izao, ny safidy sary dia napetraka mihazakazaka amin'ny Windows 7, ny farany dia farany ny dingana.
Dingana 4: Fetezan'ny fandefasana fifanarahana
Ny mombamomba ny fifandraisana dia manampy amin'ny fisokafana programa mampiasa baiko sasantsasany amin'ny dikan-teny taloha an'ny Windows OS, izay ahafahan'izy ireo miasa tsara. Izy io dia mavitrika amin'ny alàlan'ny endriky ny rakitra voatondro:
Mitadiava ny lahatahiry ao amin'ny fotony Game.exetsindrio ny bokotra havanana ary mifidiana "Properties".
Mankanesa any amin'ny fizarana "Fifampifanarahana mifamadika".
Asio marika eo akaikiny "Manandramana ny programa amin'ny fomba fanamarinana" ary ao amin'ny menu pop up, mifidiana "Windows XP (Service Pack 2)". Alohan'ny hialana amin'ny click "Ampiharo".
Izany dia mamarana ny dingana amin'ny fametrahana Truckers 2 eo ambanin'ny Windows 7, afaka mandamina amim-pahombiazana ny simulateur ianao amin'ny alalan'ny Game.bat izay voarakitra teo aloha. Antenaina fa nanampy tamin'ny adihevitra ilay toromarika etsy ambony, ary voavaha ny olana tamin'ny fanombohana ny fangatahana.